Iyo mhando 'kurudyi' uye yakanyatsorongwa yekushambadzira zano rekunyomba: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 4 October 2019	• 4 Comments
Zvikwata zvine njodzi dzemudhudhudhu zvine njodzi zvinouraya munhu wese, Mocro Mafia, zvinorwisa Parool uye Telegraaf (zvirinani izvo zvinofanirwa iyo mifananidzo inoita kuti titende. 'Kubva kuEU uye anti-globalization' inopesana 'yakazara gasi kuenderera kumberi'. Mamiriro ekunze anoramba dhidi ye 'isu tichapinda mairi mukati memakore e12'. Nationalists kurwisa Islamization. Vatendi veMedia vanopesana nenhema vanopomera nhau. Isu tiri kupupurira kupora uye kusika mhando yakavakwa kuburikidza nekushambadzira kukuru. Iyo 'kurudyi' mhando yakabatana neusaruraganda, anti-Islam, vakadzi vasina hushamwari, anti-GretaThumberg, anti-EU uye kudavira dzidziso dzekupangana uye zvichingodaro. Uyu ndiwo mutambo wepasi rese apo iro 'rekurudyi' chiratidzo rakabatana naTrump, Brexit Boris, Thierry Baudet, Marine LePen, zvichingodaro.
Nekushandura kuita brand, vezvenhau vanosemesa munhu wese neziso rakaoma pane nhau kuenda 'kurudyi'. "Ah, iwe uri 'anoramba mamiriro ekunze'" kana "Oo, uri munhu akadaro asingatendi mumusangano we911". Izvo zvinonzi brark.
Vezvenhau vakapisa nokungwarira chinyorwa 'kurudyi' kuburikidza nematinji akadai saThierry Baudet, Robert Jensen, George van Houts, nezvimwewo. Unovaka chiratidzo chinoonekera kumunhu wese saka unobva warega hupfumi huchiparara. Ndanga ndichifanofungidzira kuti kwenguva yakareba uye izvo zvinodaro nekuti kushoropodzwa kubva munharaunda kunofanirwa kutendeuka. Ndokusaka 'kurudyi' kwakabvumidzwa kuve munzvimbo yakataridzwa kwechinguva, nekuti mhando yaifanira kunyatsotsanangurwa, kuti kana hupfumi hwacho hukanganisa, munhu wese achashora boka iro nekupfira.
Vanhu vese avo vane humwe hunhu hwechiratidzo 'kurudyi' (yakavakwa nenhepfenyuro nevatambi vepamusoro mune zvematongerwo enyika, panguva ino vanopfeka zvakajeka 'chiJuda nyeredzi' yeiyo brand 'kurudyi'. Iyo mhando ichaiswa kunze kana kutadza kwezvese zvinhu kunogona kuiswa pane iyo brand. Ndapota cherekedza: iko kukundikana (iko kuparara kwehupfumi) kwakarongwa uye kwakarongeka nenzira yakarongeka. Ndicho chikonzero nei Trump yekutengeserana hondo uye saka Brexit chirevo. Izvo zvese zvakareba yakarongerwa kumberi!
Iyo 'kurudyi' mhando yaifanira kuve yakanyatsovakwa uye yakazowedzerwa inflores, kuitira kuti mune ramangwana hapana munhu angave nekumwe kushoropodzwa kwechinyakare kwakarongeka kurongeka uye mugwagwa wakananga kudyidzana. Iro boka rinobva rakandwa uye rine mhosva kune zvese zvinomira nekutadza. Isu tiri kupupurira mushambadziro wekushambadzira wakarongeka wepasi rese pakupedzisira kubata nekushoropodzwa kubva munharaunda. Kana iwe uchitsoropodza, saka iwe 'wakarurama' uye iwe uri weboka iro. Kwete! Icho chinyorwa chakavakirwa nevezvenhau nezvematongerwo enyika. Usatore chikamu. Usarasirire mambure echengetedzo yezvematongerwo enyika anoedza kukuisa iwe mune iyo brand. Usawire pawns dzakadzorwa seBaudet naRobert Jensen. Tora chinhambwe kubva 'kurudyi' rudzi uye polarization!
Zvematongerwo enyika uye zvinoburitswa zvinotamba pamasisa. Hapasisina mabumps kumashure. Zvakanaka kunzwa zvese izvo matirakita muThe Hague vhiki ino, asi zvese zvakanakirwa zvakarongeka, zvinodzora uye zvakapetwa. Shanduko chaiyo inouya kubva kusisiri kupa chokwadi kune vezvematongerwo enyika uye vezvenhau uye vasingavapi izwi.
Tags: Anti, Brexit, vanyengeri vanofunga, Featured, globalization, hondo dzekutengesa, brand, urudzi, zvakarurama, mukadzi asina hushamwari
4 October 2019 pa 16: 06
Kuruboshwe kune New Fascism ..
5 October 2019 pa 00: 22
Funga kuti zviri nani chaizvo kutenda kuti nyika haina kushata sezvatakaudzwa. Bangmakerij inotibata mumatumba madiki.
Ini ndinofunga kuti varimi vanoratidzira kuratidzira zuva nezuva iwe unogona nyore kuisa nyika yese. Kana iwe ukamira kubhadhara (mutero) neboka rakakura kwazvo, saka ivo havakwanise kuita chero chinhu. Iwe unofunga kuti hurumende yedu ichaenderera mberi kushanda isina kubhadharwa muThe Hague? Iwe unofunga Wim Lex anoramba achicheka asina kubhadharwa mbabvu? Handizive chokwadi, varipo nekuti isu tese vanozvida uye vanozviziva kwazvo. Iwo mabastards ari kugunun'una zuva rese asi kana Maka kana Wim Lex achiuya pamwe vanomira kumberi vaine mureza.
Kunyangwe isu tichifunga kuti takamuka, isu tinofanira kuzvibvunza zuva rega rega kana pfungwa dzedu dzisiri dzekunze.
Ndiri kuona ichi chinyorwa seicho chakanaka, pasina TV, bepanhau, redhiyo uye smartphone izuva rakanaka kwazvo munyika yakanaka 😎
7 October 2019 pa 10: 43
Iye zvino kubatanidza iyo 5G pasi pechina 'kurudyi' (kurudyi-bapiro) kubudikidza Boris Johnson uye iko kutsoropodza kuchazopedzisira kwapera.
7 October 2019 pa 20: 58
Kupera kwekutaura kwemahara
Nhepfenyuro inokurega iwe kuti umedze puspin's kana ichidikanwa, mashandisi enhema
Media iri Gara ichitaura chokwadi, yakafanana nemupristi muchechi, iri kuwedzera realy, tarisa pfupi firimu pasi, apa ndipo patiri
« 'Kusarudzika kwemamiriro ekunze' kwakabatana nefungidziro dzekupangana, vezvematongerwo enyika mapapiro uye manzwa
Kuparadza Kupandukira boka revateresi vakabhadharwa »
Total Visits: 13.087.123